🥇အကောင်းဆုံးရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများ ဇွန်လ 2022 | အခမဲ့ Pro ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန်။
If ရေနံကုန်သွယ်မှု သင်စိတ်ဝင်စားမည့်အရာတစ်ခုလိုပုံရပြီး သင်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲနေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနံကို မည်ကဲ့သို့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်၊ လူကြိုက်များသော နည်းဗျူဟာများကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး ဟုတ်ပါတယ် - ဆွေးနွေးပါမည်။ 2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး ရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများ.
ကျောက်မီးသွေးနှင့်ရေနံကဲ့သို့စွမ်းအင်များသည်ကမ္ဘာကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သို့သော်စက်မှုလက်မှုတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့သည့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသောမျက်မှောက်ခေတ်ရေနံလုပ်ငန်းကို ၁၈၃၀ နှောင်းပိုင်းတွင်ပြန်တွေ့နိုင်သည်။
2022 သို့ မြန်မြန်ရောက်ပြီး ရေနံသည် မတည်ငြိမ်မှု အရှိဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်စည် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နေ့လျှင် စည်ပေါင်း ၉၅ သန်းကို အံ့မခန်းအသုံးပြုနေပါသည်။ ၀ယ်လိုအားနှင့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အဓိကအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဆီသည် ကြီးမားသောစျေးနှုန်းအတက်အကျများကို ပုံမှန်မြင်နေရသည်။
သင်သည်ဤဆွဲဆောင်မှုရှိသောကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါသလော။ သတင်းကောင်းမှာဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကုန်သည်များနှင့်စောင်ရန်းရန်ပုံငွေများအတွက်အသုံးမချတော့ပါ။ ငါတို့ကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ရေနံကိုပရိုဖိုင်းကဲ့သို့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ရေနံအရောင်းအဝယ်အခြေခံကိုစတင်လေ့လာကြပါစို့။ ရေနံရောင်းဝယ်သည့်အခါသင်ရေနံစျေးနှုန်းမြင့်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းရှိမရှိမှန်မှန်ကန်ကန်ခန့်မှန်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုမဆိုအဓိကအားဖြင့်စျေးကွက်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုနှင့် ၀ ယ်လိုအားတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရေနံ ၀ ယ်သည်ထက်ရောင်းဝယ်သူထက်ရောင်းအားပိုများပါကစျေးနှုန်းတက်လာလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်လူများရေနံရောင်းသည့်အခါစျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်။ ထိုနေရာမှအတွေ့အကြုံရှိသောကုန်သည်များသည်စျေးနှုန်းအတက်အကျကိုအပြည့်အဝအသုံးချလေ့ရှိသည်။
Brent ရေနံစိမ်းသည် တစ်စည်လျှင် ၃၇ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ဤအရာကိုစိတ်ထဲထားပြီးထားပါ ဝယ်ခြင်း $500 တန် အော်ဒါ။
သင် မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းခဲ့သည် – Brent ရေနံစိမ်းသည် ယခုအခါ တစ်စည်လျှင် $56 ရှိသည်။
ဤစျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုသည် Brent ရေနံစိမ်းတန်ဖိုး 61.35% မြင့်တက်လာကြောင်းပြသသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ရောင်းချ သင်၏အမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်ရန်အမိန့်
သင့်မှာယူမှုသည် ယခု $806.75 တန်ပါသည်။
သင်၏ $500 ရှယ်ယာမှ၊ သင်သည် ဤကုန်သွယ်မှုတွင် $306.75 အမြတ်များ ရရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းသင်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့သည် - ထို့ကြောင့်သင်သည်အမြတ်အစွန်းဒေါ်လာ ၃၀၆.၇၅ ကိုရရှိခဲ့သည်။
စျေးကွက်များသို့ဝင်ရောက်ပြီးရေနံအရောင်းအ ၀ ယ်စတင်ရန်သင်ကောင်းသောပွဲစားလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစား5ဦးကို ဤစာမျက်နှာအောက်၌ ထပ်မံဖော်ပြထားပါသည်။ ရေနံမှတဆင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ CFDs - ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုစောင့်ကြည့်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်မည့် ရေနံစည်ကြီးများကို ပိုင်ဆိုင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ကျနော်တို့ဖော်ပြပြီးပြီဆိုရောင်းအားနှင့်ဝယ်လိုအားကြောင့်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းကိုပြောင်းလဲလေ့ရှိတယ်။ ရေနံရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာထိုစျေးနှုန်းတက်လိမ့်မည်၊ မကျမည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသန်းပေါင်းများစွာမှနေ့စဉ်ရေနံကိုအသုံးပြုပြီးသုံးစွဲကြသည်။ ကုန်သွယ်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသန်းနှင့်ချီသောသူများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်။
ရေနံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်စည်ဖြင့်အမြဲတမ်းကုန်သွယ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စာရေးသားချိန်တွင်တစ်စည်လျှင်ဒေါ်လာ ၃၆.၁၇ ဖြစ်သည်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာဆီဈေးဟာကန်ဒေါ်လာ ၃၆.၁၇ အောက်ကျလိမ့်မယ်၊ တန်ဖိုးမြင့်တက်မလားဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားနေတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါကဏ္ example - သင်အမြတ်ရရှိသည်ဖြစ်စေသင်ပြောင်းလဲမှုကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ခြင်းရှိ၊ မရှိစီးနင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာမှသင်သိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးမှန်ကန်သောအမိန့်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
Brent နှင့် WTI ရေနံစိမ်းစံနှုန်းညွှန်းကိန်း
ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသောစံနှုန်းများသည်တတိယပါတီစတော့အိတ်ချိန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ နေရာအတော်များများတွင်စံသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထိမိသည့်အတိုင်းဤစျေးနှုန်းများသည်ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားအပေါ်အခြေခံသည်။
အရေးကြီးဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်ညွှန်းကိန်းနှစ်ခုသည် WTI ရေနံစိမ်းနှင့် Brent ရေနံစိမ်းများဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောရည်ညွှန်းနံပါတ် 1 အမှတ်ဖြစ်ပါတယ် ကျော်လွန် အမေရိကန်။ အနောက်တက္ကဆက်အလယ်အလတ် (WTI) သည်နံပါတ် ၁ ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည် အတွင်း အမေရိကန်။
နှစ် ဦး စလုံးနှိုင်းယှဉ်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများရှိသည်, ဒါပေမယ့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တန်ဖိုးကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ရေနံသည်လွန်ကဲစွာရောင်းဝယ်သောနယ်မြေသို့ ၀ င်သွားပါက၎င်းသည်စံနှုန်းနှစ်ခုစလုံးကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ဆီမလုံလောက်လျှင်ရေနံအညွှန်းကိန်းနှစ်ခုလုံး၏တန်ဖိုးမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်း ၀ ယ်မှုနှင့် ၀ ယ်လိုအားအကြိမ်အနည်းငယ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမည်သို့တန်ဖိုးထားသည်ကိုကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေနံနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတင်းမာမှုများကဲ့သို့ပထဝီနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုများကြောင့်စျေးနှုန်းကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ “ ရေနံတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများ၏အဖွဲ့အစည်း” (OPEC) ကိုပြောရန်မလိုပါ။
OPEC ကိုဆော်ဒီအာရေးဗီးယားက ဦး ဆောင်ပြီးအခြားသောရေနံကြွယ်ဝသောနိုင်ငံ ၁၄ ခုလည်းရှိသည်။ သင် OPEC ဆိုသည်ကိုသင်မသိပါကအဖွဲ့အစည်းသည်ရေနံစျေးကွက်ကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ ၄ င်းတို့အောင်မြင်ရန်အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုမှာပိုင်ဆိုင်မှု၏ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
US ရေနံကုမ္ပဏီကြီးများထံမှခုခံကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် OPEC သည်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းမှကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟု သိ၍ ရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်စျေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်စျေးကွက်ပေါက်စျေးတက်ရန်ရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုအလွယ်တကူနှေးနိုင်သည်။
ယခုတွင်သင်သည်ရေနံရောင်းဝယ်မှုသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်စျေးကွက်စျေးနှုန်းကို ဦး တည်ရာသို့မောင်းနှင်နေကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သည်။ အခွင့်အလမ်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်ကိုသိလိုသည်။
ရေနံရောင်းဝယ်ခြင်း - CFDs
ရေနံအရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွင်ထပ်မံဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းများဖြစ်သော CFD ပွဲစားမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
CFDs မှတစ်ဆင့်ရေနံရောင်းဝယ်ခြင်းသည်သင်၏အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှု (ဤကိစ္စတွင်ရေနံ) ကိုမပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ CFD သည်အစားထိုးပစ္စည်း၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကိုစောင့်ကြည့်နေသည်။
ဆီစျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်၏ CFD ပွဲစားများသည်အထက်ပါ WTI သို့မဟုတ် Brent ကဲ့သို့သောရေနံစံသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းမှစျေးကွက်တန်ဖိုးရရှိလိမ့်မည်။
သင့်ကိုဆီ CFD ကုန်သွယ်မှုဥပမာတစ်ခုပေးရအောင်။
WTI စံနှုန်းသည် ရေနံဒေါ်လာ ၃၄.၅၀ ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ CFD ကုန်သွယ် ပလပ်ဖောင်းကိုးကား $34.50 ။
ဆီဈေးကဒါကျလိမ့်မယ်မင်းယုံတယ် ရောင်းချ $200 တန် အော်ဒါ။
၃ ရက်အကြာတွင် WTI စံနှုန်းသည် ရေနံဒေါ်လာ ၃၀.၅၀ ဖြင့် ဈေးတက်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် သင်၏ CFD ကုန်သွယ်မှုသည် ရေနံကို $30.50 ဖြင့် တန်ဖိုးတက်နေသည်။
သင်နေရာချသည် ဝယ်ခြင်း ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန်။
သင်သည် ဤဆီ CFD အနေအထားတွင် 11.59% အမြတ်ရခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များအားရေနံ CFD ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကော်မရှင်ကိုမှအားသွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကမသာပေမယ့်သင် 1:10 ၏သြဇာကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အကောင့်တွင် 1$ တိုင်းအတွက် - သင်သည် $10 ဖြင့် ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ leverage သည် သင်၏ အမြတ်များကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည် -သာမက သင်၏ ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်း တိုးပွားစေပါသည်။
ရေနံရောင်းဝယ်မှု - ရွေးစရာများ
ရေနံကို 'option များ' သုံး၍ လည်းကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုသည်မှာသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမြင့်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းကိုခန့်မှန်းရန်လိုအပ်နေသေးသည်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုမီပြုလုပ်သင့်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ရေနံစိမ်းဖြစ်ပါကသင်ကုန်သွယ်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကသင်၌၎င်းရှိကြောင်းသိထားသင့်သည် မှန်သော ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်, ဒါပေမယ့်မဟုတ် တာဝန်ရှိ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့။
သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုများ သင်၏ပွဲစားနှင့်စာချုပ်သည်3လဖြစ်သည်။
ဤစာချုပ်ပါ 'ဒဏ်ရိုက်ဈေး' သည် ဒေါ်လာ 60 ဖြစ်သည်။
စာချုပ်ကိုဖွင့်ရန် သင်သည် 'ပရီမီယံ' $3 ပေးချေရန် လိုအပ်သည်။
ရွေးချယ်ခွင့်စာချုပ်တစ်ခုစီတွင် ရေနံစိမ်းစည် ၅၀၀ ရှိသည်။
60 လအတွင်း ရေနံတန်ဖိုး $3 ထက် တက်လာမည်ဟု ခံစားရသည် ။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ၀ ယ်ပါ ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်မှုများ။
သင်သည် ဤစာချုပ်အတွက် $1,500 (500 * $3 ပရီမီယံ) ကို ပြင်ရပါမည်။
အခုဆိုပါစို့၊ ၃ လကုန်သွားပြီ၊ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒေါ်လာ ၈၀ ကျတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏“ သပိတ်စျေးနှုန်း” ဒေါ်လာ ၄၀ အထက်ဒေါ်လာ ၂၀ ဖြစ်ပြီးသင်အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။
မင်းရဲ့ စုစုပေါင်းအမြတ်က ရေနံတစ်စည်ကို $20 ပါ။
မင်းရဲ့ 'ပရီမီယံ' က $3 ဆိုတော့ မင်းရဲ့အသားတင်အမြတ်က တစ်စည်အတွက် $17 ပါ။
သင်၏ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်ခွင့်များ အဆက်အသွယ်တွင် စည်ပေါင်း 500 ပါရှိသည် - ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေမှာ $8,500 (500x$17) ဖြစ်သည်။
သင်၏ရွေးချယ်မှုစာချုပ်သည်ရေနံတန်ဖိုးနှင့်တူစွာပြောင်းလဲသွားမည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်း - သင်ကသင်၏စာချုပ်များကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည် - သင်၏ကန ဦး အမိန့်များနှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှုစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲအကြားမည်သည့်အချိန်တွင်။
ရေနံရောင်းဝယ်ရေး - အနာဂတ်
CFD များသည်ရေတိုကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများအတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်း၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအနည်းငယ်မျှသာဖွင့်ထားလိုလျှင်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည် အနာဂတ်။ အနာဂတ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ လစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပြီး၊ စာချုပ်တိုင်းတွင် ၄ င်း၏စျေးနှုန်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရေနံစည်လျှင် ၄၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
အများကြီး၏အမှု၌ကဲ့သို့ ရွေးချယ်မှုများ - သင်စာချုပ်၏အဆုံး၌စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားမည်လားသို့မဟုတ် ပို၍ နိမ့်မည်လားဆိုသည်ကိုသင်မှန်ကန်စွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အဓိကကွာခြားချက် ရွေးချယ်မှုများ နှင့် အနာဂတ် ဆိုလိုသည်မှာနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်သင်သည်သင်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင်အနာဂတ်ကိုဆက်လက်ကိုင်စွဲထားပါကသင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်တရားဝင်တာ ၀ န်ရှိသည်။
ရေနံရောင်းဝယ်ရေး - လူကြိုက်များသောမဟာဗျူဟာသုံးခု
ရေနံမဟာဗျူဟာ ၁ - ပံ့ပိုးမှုအဆင့်ကိုအသုံးချပါ
အထောက်အပံ့အဆင့်များသည်ကုန်သည်များအားဤပိုင်ဆိုင်မှု၏ 'အဓိကစျေးနှုန်းအဆင့်' ကိုပြသသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရည်မှန်းချက်ခုခံသရုပ်ဖော်ရန်ဖြစ်ပါသည် နှင့် ရေနံစျေးကွက်အတွက်ထောက်ခံမှုအဆင့်ဆင့်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ရေနံသည်အောက်ဘက်သို့ ဦး တည်နေပါကသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် အဆင့်ကိုရပ်တန့်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းကိုနောက်ထပ်ကျဆင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းအရေးယူနေစဉ်ထောက်ခံမှုလိုင်းအထက်စျေးကွက်ဝင်ခြင်းအားဖြင့် ရပ်တန့်-အရှုံး အထောက်အပံ့လိုင်းအောက်ရှိအမှာစာ - သင်သည်သင်၏အန္တရာယ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလျှော့ချနိုင်သည်။
သေးငယ်တဲ့အမြတ်အစွန်းကိုပုံမှန်ရှာနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဆီ ဉီးခေါင်းရေ မင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤအရာသည် များစွာသော အဖွင့်များ ပါဝင်သည်။ ဝယ်ခြင်း နှင့် ရောင်းချ တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်နေ့ကတစ်လျှောက်လုံးအမိန့် - သင်သည်ဤမတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်၏အများဆုံးစေနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဤနည်းလမ်းသည်သင်ရေနံစျေးနှုန်းတင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသည့်ကာလကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရေနံသည်တစ်စည်လျှင် ၃၅ ဒေါ်လာမှ ၃၈ ဒေါ်လာကြားအတွင်းအရောင်းအဝယ်လုပ်နေသည်ဟုဆိုပါစို့။
ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်သောစုစည်းမှုအကွာအဝေးသည်ကျွမ်းကျင်သော ဦး ရေပြားကုန်သည်များကိုစျေးနှုန်းနှစ်ခုကြားတွင်မကြာခဏ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ရေနံကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအတော်လေးနိမ့်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်စျေးသည်ဒေါ်လာ ၃၈ မှ ၃၅ အောက်သို့တက်လိမ့်မည်ဟုကုန်သည်ကသိသည်။ ဒါကိုတန်ပြန်ရန်သူတို့ကအကွာအဝေးနှစ်ခုစလုံးမှာ stop-loss အမှာစာရပါလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်အထိရေနံကုန်သည်သည်အကွာအဝေးအတိုင်းအတာအထိရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးအမြတ်ထုတ်နိုင်သည်။
ရေနံနည်းဗျူဟာ ၃။ ရေနံရောင်းဝယ်ရေး
ဆီလွှဲအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်း၏အကြံသည်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားရန်ဖြစ်သည်။ ရေလွှဲလွှဲကုန်သွယ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြိုးစားအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် ဝယ်ခြင်း ရေနံအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသောအခါအမိန့် - ထိုအမြတ်အစွန်းကိုဖမ်းရန်သင့်အား enable သွားမယ့်။
ထိုအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ လွှဲထားသည့်ကုန်သည်များသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှရက်သတ္တပတ်များစွာအထိရာနှင့်ချီသောနေရာများတွင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖွင့်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်ရောက်နေပြီဟုထင်ရသည့်အခါကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်တစ် ဦး သည်အလုပ်နှစ်ခုလုပ်လိမ့်မည်။ ပထမအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ယင်းတို့၏အကျိုးအမြတ်အတွက်အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းရှိမရှိသေချာစေရန်သူတို့၏ရာထူးမှထွက်သွားကြလိမ့်မည်။
ထို့နောက်ကုန်သည်သည်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုဖမ်းရန်နောက်ထပ်အမှာစာရောင်းမည်။ တစ်ဖန်ကုန်သွယ်မှုသည်ရက်များ၊ ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အထိဆက်လက်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ အဓိကအချက်မှာ၎င်းတို့သည်စူပါတိုတောင်းသောအပြောင်းအလဲများကိုဖမ်းစားခြင်းထက်ဆန့်ကျင်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်လမ်းကြောင်းများနှင့်ဆက်နေရန်မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်အာရုံစိုက်လိုသောပစ္စည်းကိုမည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်ပြီးကောင်းပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းရေနံစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ပွဲစားတစ် ဦး သင်လိုအပ်သည်။
ရေနံရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အွန်လိုင်းပွဲစားများရာနှင့်ချီရှိသည်။ ဤအရာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းနေသော်လည်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများများများလေလေ၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်သူတို့ကို ဖြတ်၍ စစ်ထုတ်ရန်ခက်ခဲလေလေဖြစ်သည်။
သင်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်လား၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွမ်းကျင်သည့်ကုန်သည်တစ် ဦး လားပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအလွယ်တကူသွားနိုင်သောပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။
အချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ဖောက်သည်များအားလုံးအားသီချင်းဆိုအားလုံးကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဆီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခက်တွေ့စေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်ဟာသုံးစွဲသူအတွက်လွယ်ကူသောစူပါပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေသင့်သည်၊ သင်လိုချင်သောပစ္စည်းကိုရှာဖွေပြီးသင့်အမှာစာများကိုလွယ်ကူစွာရနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ ၂ ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကြပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်သောပလက်ဖောင်းကိုသင်ရှာဖွေသောအခါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသာသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်မှားယွင်းသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ပါကကော်မရှင်နှင့်အခကြေးငွေများသည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုကြီးမားစေသည်။ အချို့သောရေနံပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ ပိုလျှံသည်။ ပမာဏကြီးမားစွာရောင်းဝယ်သူများအတွက်ဤအရာသည်ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းစျေးကွက်ငယ်များဖြင့်စျေးကွက်ကို ၀ င်လိုလျှင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်ရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများသည်ကော်မရှင်အားရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပုံစံပေးရသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ပွဲစားသည် ၁% ကော်မရှင်ကောက်ခံပြီး၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ လောင်းကြေးရှိပါက - ဤဥပမာတွင်သင်၏ပွဲစားကို ၁၅ ဒေါ်လာပေးရမည်။
သူကပြောကြားခဲ့သည်မှာယခုသင်သည်သက်ပြင်း ချ၍ သက်သာစေသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးထားသောအကောင်းဆုံးရေနံပွဲစားများသည် CFD များမှတဆင့်ဖောက်သည်များထံမှကော်မရှင်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရေနံရောင်းဝယ်မှုတွင်အသစ်ဖြစ်နေလျှင်၊ 'ပျံ့နှံ့'' အကြားကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ် ဝယ်ခြင်း ရေနံစျေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချ ရေနံစျေးနှုန်း။ ကွာဟလေလေ၊ ကုန်သည်တစ် ဦး အနေနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ ပွဲစားနှစ် ဦး နှင့်အတူတူမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်နှစ်သက်ဖွယ်ပြန့်ပွားမှုထက်နည်းသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုသတိထားပါ။
သိုက်နှင့်ထုတ်ယူခြင်း protocol ကို
အကောင့်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သင့်ကိုယ်သင် မနှစ်မြှုပ်မီ မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများရရှိနိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသင့်သည်မှာ သိသာထင်ရှားပါသည်။ သို့သော် အချို့ပွဲစားများသည် ဘဏ်ကြေးနန်းအပ်ငွေများကိုသာ လက်ခံနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုရှိလျှင် - ဥပမာ- ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ် သို့မဟုတ် PayPal က - ထို့နောက် ၎င်းကို ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် စာရင်းသွင်းထားကြောင်း သေချာစေရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင်၏အကောင့်မှငွေထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်မည်သည့်အခကြေးငွေမဆိုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ သင်သည်ထိပ်တန်းရေနံရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်း Skilling ကိုအသုံးပြုနေပါကသင်ငွေသွင်းရန်မလိုပါ။
သင်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများကိုရှာဖွေရန်ရောက်ရှိနေသည်နှင့်အမျှစည်းမျဉ်းများကိုဖော်ပြထားခြင်းသည်သာမှန်ကန်သည်။ ကဲ့သို့သော စည်းကမ်းအဖွဲ့မှ လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသော ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများနှင့်သာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပါ။ FCA or ASIC - လိမ်လည်မှုများနှင့် တွေ့နေရသော ပွဲစားများထံမှ သင့်ကို အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း သင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်များအားလုံးအတွက်သန့်ရှင်း။ တရားမျှတစေရန်ဖြစ်သည်။ တရား ၀ င်သတ်မှတ်ထားသောပွဲစားများ (ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းမှကဲ့သို့) သည်တင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ 'account segregation' ဖြစ်သည်။ မသိသောသူများအတွက်၊ အကောင့်ခွဲခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေသည်ပွဲစားကုမ္ပဏီ၏ဘဏ်နှင့်သီးခြားဘဏ်စာရင်းတွင်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
ရေနံရောင်းဝယ်ခြင်းအွန်လိုင်း - အောင်မြင်ရန်သိကောင်းစရာငါးချက်
ရေနံရောင်းဝယ်ရေးလောကတွင် သင်သည် လုံလောက်သောထိတွေ့မှုကို ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါ။ ဗျူဟာများအကြံပြုချက်များနှင့် လှည့်ကွက်များ။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဗျူဟာတွင် အမှန်တကယ်အသုံးချရန် ဆုံးဖြတ်သမျှသည် သင့်အပေါ်တွင်ရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါတို့ငါးခုအတူတကွထားပါတယ် ကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ သင်စဉ်းစားရန်အဘို့။ မျှော်လင့်ချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်နောင်တွင်သင့်အားအောင်မြင်သောရေနံရောင်းဝယ်သူဖြစ်လာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ်လတ်တလောရေနံသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပေးပို့ပါ
နောက်ဆုံးပေါ်ရေနံသတင်းနှင့်ခန့်မှန်းချက်များအားအမြဲတမ်းသိရှိထားခြင်းကရေနံစျေးကွက်၏ ဦး တည်ရာကိုခန့်မှန်းရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရေနံစျေးကွက်သည် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားအပေါ်များစွာမူတည်သည်။
ပထ ၀ ီနိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဘဏ္turာရေးမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားကိုဟန့်တားနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရာတွင်သင့်အားကူညီရန်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များစုပုံထားပါသည်။
ရေနံရောင်းဝယ်မှုအချက်အလက်များသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ အချို့သောကုန်သည်များသည်ဘဏ္andာရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းများနှင့်အညီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသိရှိရန်အချိန်မရှိသေးဘဲစျေးနှုန်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ရေနံရောင်းဝယ်မှုအချက်အလက်များသည်အတွေ့အကြုံမရှိသောကုန်သည်များအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများသည်အကျိုးအမြတ်များသောကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ရှုပ်ထွေးသော algorithms နှင့် software ကို အသုံးပြု၍ စျေးကွက် ၂၄/၇ ကိုစစ်ဆေးသည်။ နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာပါရမီရှင်ပါ။ ပံ့ပိုးသူက ၀ င်ပေါက်အမှတ်အသားနဲ့သင်လုပ်သင့်မသင့်ကိုအချက်ပြပေးလိမ့်မည် ဝယ်ခြင်း or ရောင်းချ.
ကြောင်းသာပေမယ့် signal ကိုလည်းတစ် ဦး အကြံပြုထားသည် ရပ်တန့်-အရှုံး အမှတ်နှင့်သင်လုပ်သင့်သောနေရာအတိအကျ အမြတ်အစွန်း. ဤသည်မှာရေနံရောင်းဝယ်မှု၏လုံးဝ passive နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ - သင်၏အချက်ပြမှုအပေါ်သင်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်သင်၏ခေါ်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့သည် Forex နှင့် cryptocurrencies ကိုအဓိကထားသောပြည့်စုံသောအချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရံဖန်ရံခါရေနံရောင်းဝယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သည့်အခါစျေးကွက်များမည်သို့သွားမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ကြောင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအားကျွန်ုပ်တို့ Telegram မှတဆင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီသိစေချင်သည်။
ရေနံအရောင်းအ ၀ ယ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စာအုပ်များရာနှင့်ချီ။ ရှိသည် - ဟောင်းနွမ်းသောပုံစံဟောင်းမြင်သာသောစာအုပ်ပုံစံနှင့် e-book နှင့် audiobooks ပုံစံများရှိသည်။ အကောင်းဆုံးရေနံရောင်းဝယ်ရေးစာအုပ်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေခြင်းဖြင့်ကောက်ပဲသီးနှံ၏မုန့်ကိုအလွယ်တကူဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
စက္ကူပိုက်ဆံနဲ့ရေနံအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းဟာအကျိုးရှိဖို့သေချာပါတယ် သင်အမှန်တကယ်ဘဝဈေးကွက်တွင်အခမဲ့ကုန်သွယ်နိုင်ရုံသာမကသင်၏အရင်းအနှီးကိုမစွန့်လွှတ်ဘဲရေနံရောင်းဝယ်ရေးနည်းဗျူဟာအသစ်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
များစွာသောအွန်လိုင်းရေနံ CFD ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များ၏သရုပ်ပြအကောင့်များကိုပေးသည်။ အချို့ကသင့်အားကုန်သွယ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုပေးသည် - ဥပမာ - ကြီးမားသောစက္ကူလက်ကျန်ငွေဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ။ ဤအချက်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုမစွန့်လွှတ်မီရေနံရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက်နှင့်ထိတွေ့ရန်သင့်တွင်ငွေအရင်းအနှီးအလုံအလောက်ရှိသည်။
မိတ္တူကူးခြင်းသည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်မတူပါ အွန်လိုင်းကုန်သွယ် အာကာသ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပါတယ် အချို့သော ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်စစ်ဆေးပြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားသက်သေပြနိုင်သောကုန်သွယ်မှုမှတ်တမ်းကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သင့်တွင်ရွေးချယ်ရန်မိတ္တူကူးကုန်သည်များရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။ အများစုသည်တိကျသောစျေးကွက်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအစုစုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိကြသည်။ သင်နှင့်အတူတူပင်ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူတူညီသောရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ကူးယူကုန်သည်ကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်သည်။
ထိုအခါသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ“ ကူးယူကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု” အတွက်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်သည် (eToro တွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြစ်သည်) နှင့်သူတို့၏အစုစုကိုထင်ဟပ်ရန်ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် - အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစုရှယ်ယာ ၁.၆% ကိုရေနံစိမ်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးအစုစုက၎င်းကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်။
ရေနံရောင်းဝယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်၏မျက်စိကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်၍ သင်၏ငွေကြေးရည်မှန်းချက်များကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့မဟာဗျူဟာများ, အမိန့်များနှင့်အကြံပေးချက်များဆွေးနွေးခဲ့ကြပါပြီသာမက - ဒါပေမယ့်ပွဲစားရွေးချယ်ရာတွင်အခါထွက်ကြည့်ရှုရန်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်။
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်အပြည့်အဝစည်းမျဉ်းများနှင့်လေးစားမှုရှိသည့်သင်၏သုံးသပ်ချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ပါအကောင်းဆုံးအရောင်းအဝယ်ပွဲစား ၅ ယောက်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
1. AVATrade - ယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူဆီ CFDs
AvaTrade သည်မြင်ကွင်းတွင် ၁၀ နှစ်ကျော်နေခဲ့ပြီးအိုင်ယာလန်၊ Australiaစတြေးလျ၊ ကနေဒါနှင့်ဂျပန်စသည့်ဒေသအသီးသီးတွင်လိုင်စင်ရပြီးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဤကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည် Forex၊ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်သတ္တုနှင့်ရေနံကဲ့သို့သောကုန်ကြမ်းများဖြစ်သော CFD အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဆီ CFDs များရောင်းဝယ်သည့်အခါ Avatrade တွင်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွားမှုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောသူဖြစ်ပါကသင်သည်လျင်မြန်စွာမှာယူခြင်း (သို့) သင်၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်လိုသည်။ Avatrade သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကြောင့်၎င်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ ဒီအက်ပ်ကို 'AvaTradeGO' လို့ခေါ်တယ်၊ သင်အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကုန်သွယ်မှုနှင့်ငွေသွင်းနိုင်တယ်။
AvaTrade သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်အခြားပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တတိယပါတီကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော MT4 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ သငျသညျလေ့လာသူကုန်သည်ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ရေနံရောင်းဝယ်ရေးနည်းဗျူဟာအသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားစဉ်းစားခဲ့လျှင်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရန်ပုံငွေများကိုချက်ခြင်းစွန့်စားစရာမလိုဘဲအပြည့်အ ၀ တင်ထားသောရေနံကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ AvaTrade ဖြင့်ဆီ CFDs များကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ သာဖြင့် စတင်၍ သင်စတင်နိုင်ပါသည်
ရေနံရောင်းဝယ်မှုအပေါ် ၁:၂၀ အထိသြဇာရှိသည်
၃။ Capital.com - အမျိုးမျိုးသောကော်မရှင်အခမဲ့ရေနံစျေးကွက်များ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော eToro ကဲ့သို့ Capital.com သည်လတ်တလောရေနံကုန်သည်များအကြားလူကြိုက်များသည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူဖန်တီးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရေနံအရောင်းပွဲစားလမ်းညွှန်ကဤ ၀ က်ဘ်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်သင်ပြီးပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံရှိသော်ငြားသွားလာရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒီပွဲစားထံမှကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဘဏ္financialာရေးကုန်သွယ်တူရိယာ 3,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီမှာရေနံရောင်းဝယ်မှုဟာကော်မရှင်ကကင်းလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာလား။ အရေးအကြီးဆုံးပြန့်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ရေနံစိမ်းကို ၀.၀၄% မျှဖြင့်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ဘဏ္instrumentာရေးဆိုင်ရာကိရိယာကိုရွေးချယ်ပြီးသင်မည်မျှရှယ်ယာ ၀ ယ်လိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်ဆီရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်သုံးစွဲသူများအား CFDs များအဖြစ်ရေနံအနာဂတ်ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားစေသည်။ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင်၎င်းသည်သမားရိုးကျအနာဂတ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သငျသညျရေနံတင်သင်္ဘောကိုတင်ပို့ယူစဉ်းစားသောအခါပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး!
ငါတို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ Capital.com သည်ကော်မရှင်မပါဝင်သည့်ပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်ကြုံတွေ့ရမည့်တစ်ခုတည်းသော 'အခကြေးငွေ' များသည်ပြန့်ပွားမှုများတွင်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ပွဲစားသည်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောအခကြေးငွေကိုဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့်ကောက်ခံသည် - သင်သည်သင်၏အကောင့်ကို ၁၂ လနှင့်အထက်ကုန်သွယ်ရန်မသုံးခဲ့မှသာလျှင်ငွေယူနိုင်သည်။
Capital.com ကို FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ အပြည့်အဝ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ဤနေရာတွင် အနိမ့်ဆုံးအပ်ငွေသည် e-wallets သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်မှတစ်ဆင့် ငွေသွင်းသည့်အခါ အလွန်ရနိုင်သော $20 ဖြစ်သည်။
လေ့လာသူများအတွက်ဂရိတ်ပညာရေးဆိုင်ရာ app ကို
အွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အလွန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၎င်းကို ၁၀ မိနစ်အောက်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယနေ့သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားနှင့်သင်မည်သို့စတင်နိုင်ကြောင်းရိုးရှင်းသောအဆင့် ၃ ခုအားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဆင့် ၁ - ရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ရွေးချယ်ပါ
သင်ပထမဆုံးပြုလုပ်ရန်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစား၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ ဦး တည်သွားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်စသောအခြေခံကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအဖွဲ့မှလိုင်စင်ပေးထားသည်ဆိုပါက KYC (Your Customer Customer) ဖြစ်စဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူတစ်ခုတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၂ - သင်၏ရေနံရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ကိုရန်ပုံငွေထည့်ပါ
မင်းရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဆီရောင်းဝယ်ဖို့မင်းဒါကိုရန်ပုံငွေလိုတယ်။ စင်မြင့်ပေါ်ရှိစာရင်းများမှငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုသာရွေးချယ်ပြီးသင်ငွေထည့်လိုသည့်ပမာဏကိုထည့်ပါ။ မမေ့ပါနှင့်၊ အွန်လိုင်းပွဲစားများသည်အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် 3: သင့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်ချထားပါ
သင်သိသည့်အတိုင်းရေနံစျေးနှုန်းမြင့်တက်မည်၊ မကျသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်မှာယူဖို့လိုတယ် ဝယ်ခြင်း or ရောင်းချ မင်းပွဲစားနဲ့ သင်၏အစစ်အမှန်အကောင့်ရန်ပုံငွေထဲသို့မ ၀ င်မီကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ရန်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည်ကောင်း၏။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင်သည်အစပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်လောင်းကြေးငယ်များနှင့်စတင်နိုင်သည်။ သင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းနှင့်နေသားတကျဖြစ်နေစဉ်သင်၏ကန ဦး အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းသွားစေလိမ့်မည်။
နှစ်စဉ်ရေနံရောင်းဝယ်မှုသည်လူကြိုက်များလာသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး၏ကျဆင်းမှုနှင့်ကျဆင်းခြင်းနှစ်ခုလုံးမှအကျိုးရယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပွဲစားအများစုသည်သင့်ဆီရောင်းဝယ်မှု၏အမြတ်အစွန်းကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်အားသြဇာဖြင့်ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာဒေါ်လာ ၁၀၀၀ သည်သင့်အားအများဆုံးကုန်သွယ်မှုအဖြစ်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, စျေးကွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အပေါ်မမှန်ကန်ပါလျှင်၎င်းသည်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုပိုမိုချဲ့ကားနိုင်သောကြောင့်, သြဇာကိုသတိနှင့်အသုံးပြုသင့်သည်။
ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောအကောင်းဆုံးရေနံရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများအားလုံးသည်အပြည့်အ ၀ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်၌ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေကြောင်းသိရှိခြင်းကလွယ်ကူစွာအနားယူနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရေနံရောင်းဝယ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ CFD ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ CFDs များသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမှန်တကယ်ရေနံစျေးနှုန်းကိုသာထင်ဟပ်စေသဖြင့်၎င်းကိုသင်အလွန်ဈေးသက်သာပြီးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါကိုလုပ်ဖို့ CFDs ကနေတစ်ဆင့်ဆီရောင်းဖို့လိုတယ်။ သတိပြုပါ၊ သင်လျှောက်ထားနိုင်သည့်သြဇာပမာဏသည်သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံနှင့်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ (လက်လီသို့မဟုတ်ပညာရှင်) စသည့်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်ရေနံပွဲစားများသည် ၁း၁၀ တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်သြဇာပမာဏကိုကန့်သတ်လိမ့်မည်။
CFD ပွဲစားများကသင့်အားသရုပ်ပြကုန်သွယ်မှုအကောင့်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရေနံကို ၁၀၀% အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ထိုအခါသင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံနှင့်ကုန်သွယ်ရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသောအခါ, သင်ရိုးရိုးသင့်ရဲ့ပွဲစားအကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်လပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာရေနံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားနေပါက ETF ကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးအကြံပေးသည်။ ETF သည်ရေနံစျေးကွက်နှင့်ဆက်နွယ်သောဘဏ္financialာရေးတူရိယာများဖြစ်သောဥပမာ၊ အနာဂတ်၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့်ရေနံသိုလှောင်မှုများကိုရရှိလိမ့်မည်။ ဒါက CFD ကုန်သွယ်ရေးအခကြေးငွေကြောင့်မထိခိုက်စေဘဲရေရှည်စျေးနှုန်းနဲ့သင့်ကိုရေရှည်စျေးကွက်ထဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
CFD အရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဆီအလွယ်တကူတိုနိုင်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာရောင်းရန်အမှာစာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဆီဈေးကျသွားလျှင်သင်အမြတ်ရလိမ့်မည်။